5 Kamid Ah Kulamadii Ugu Caansanaa Ee Dhexmaray Ingiriiska iyo Denmark – Garsoore Sports
5 Kamid Ah…
Xulka kubbada-cagta Ingiriiska ayaa haatan isku diyaarinaya kulankooda weyn ee semi-finalka Euro 2020.
Waxay noqon doontaa markii labaad ee isku xigta ee semi-finalka ay gaaraan kooxda uu hoggaaminayo macalin Gareth Southgate marka laga soo tago taas waa kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah ee semi-finalka Tartanka Qaramada Yurub gaarta tan iyo habeenki nasiibku ka hiiliyay ee sannadkii 1996kii.
Ingiriiska waxay caawa la cayaarayaan xulka Denmark oo labadooda tii adkaataa ay isku diyaarineeyso fiinaal ay wajahaan xulka Talyaaniga waxaana idinkula wadaageeyna 5 kamid ah kulamadii ugu caansanaa ee labada dhinac dhexmaray.
Ingiriiska 5 Denmark 2 – Diseembar 5, 1956, Isreebreebkii Koobka Adduunka
Tommy Taylor ayaa u dhaliyay Ingiriiska seddexleey goolal ah kulankii isreebreebka Koobka Adduunka ee 5-2 ku idlaatay kulankaas oo Ingiriiska iyo Denmark dhexmaray 5tiii Diseembar 1956 wuxuuna ahaa kulan xiiso leh.
Denmark 2 Ingiriiska 2 – Sibtember 22, 1982, Isreebreebka Koobka Qaramada Yurub
Ingiriiska ayay barbarro 2-2 wada galeen Denmark kulan ka dhacay magaalada Copenhagen oo ahaa kulankii furitaanka isreebreebka Tartanka Qaramada Yurub sannadkii 1984, wuxuu Ingiriiska u ahaa kulankoodii ugu horreeyay ee uu maamulo Bobby Robson.
Denmark 0 Ingiriiska 0 – Juun 11, 1992, Koobka Qaramada Yurub
Inkastoo kulankan uu ku idlaaday barbarro gool la’aan ah hadana wuxuu ahaa kulan xamaasad leh oo fursaddo dhowr ah ay kala heleen labada dhinac balse ugu dambeyn waxay ku heshiiyeen inay dhibcaha qeybsadaan maadaama shabaqa lasoo taaban waayay.
Denmark 0 Ingiriiska 3 – Juun 15, 2002, Koobka Adduunka
Kulanka xiga ee labada xul wuxuu yimid wareegga 16-ka ee Koobka Adduunka 2002 wuxuuna ku dhamaaday guul raaxo leh oo Ingiriiska ay ka gaartay Denmark.
Goolal qeybtii hore ee ciyaarta ka kala yimid Rio Ferdinand, Michael Owen iyo Emile Heskey ayaa go’aanmiyay midkan, iyagoo diyaarinaya kulankii quarter-final-ka ee ay la yeesheen Brazil kaasoo uu kasoo muuqday Ronaldinho oo caan ku ahaa inuu badanaa gaaro shabaqa goolhayihii Ingiriiska David Seaman.
Ingiriiska 0 Denmark 1 – Oktoobar 14, 2020, UEFA Nations League
Tani waxay ahayd markii toddobaad ee ay labadan koox ku kulmaan garoonka Wembley, waxaana sii socday jadwalka kulamadaas oo dhammaantood ku dhammaaday 1-0.
Kulanka waxaa go’aamiyay gool-ku-laad uu dhaliyay Christian Eriksen billoowgii qeybtii hore, 3da dhibcoodna waxaa jeebabka ku urursatay xuka Denmark.
Labadan xul ayaa balansan caawa 10ka habeenimo xilliga geeska Afrika.